January 9, 2014 – democracy for burma
หลุด !! เมื่อวันที่9ม.ค. 57 เวลาช่วงบ่ายโมง ตำรวจกำลังซ้อมโรยตัวลงจาก ฮ. ที่ ตชด. ภาค 1 เพื่อจะจับนายสุเทพ ซึ่งยังมีการซ้อมบุกยึดตัวแกนนำและปราบปรามฝูงชน ประมาณภายในคืนของวันที่ 13-14 ม.ค.นี้
On January 9, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
On January 9, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Arakan Army soldier is awardedaprize by an officer from the Kachin Independence Army at the completion ceremony of the 13th basic military training of the Arakan Army .
Thursday, January 9, 2014 by နိရဉ္စရာသတင်း
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် စစ်ရုံးချုပ် လေ့ကျင့်ရေးဌာနမှ ကြီးကြပ်ဖွင့်လှစ်သော အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို စစ်ဒေသ နှစ်ခုတွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ယင်းသင်တန်းဆင်ပွဲ အခမ်းအနားများထဲမှ ပထမ သင်တန်းဆင်းပွဲကို ရက္ခိုင့်တပ်မတော် စစ်ရုံးချုပ်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၅) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ဒုတိယ သင်တန်းဆင်းပွဲ တစ်ခုကို ရက္ခိုင့်တပ်မ တော် အခြေစိုက်လှုပ်ရှားသော (၃၀၃) စစ်ဒေသ၌ ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၉) ရက်နေ့က ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် စစ်ရုံးချုပ်- လိုင်ဇာ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သောသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားသို့ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ၊ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင် အပါအဝင် စစ်ရုံးချုပ် စစ်ဦးစီးအရာရှိများ၊ ရှေ့တန်းတပ်စခန်းအသီးသီးမှ သက်ဆိုင်ရာတပ်မှူးများ၊ အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်စစ်သည်ရဲဘော်များ၊ ရဲမေများ၊ သင်တန်းဆင်း ရဲဘော်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသော အထူးဧည့်သည်တော်များ၊ ရက္ခိုင်မိဘပြည်သူများ အပါအဝင်စုစုပေါင်း (၄၀၀) ကျော်ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၎င်းသင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားများကို အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲ၍ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမပိုင်းကို နံနက် (၆) နာရီတွင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် ဌာနချုပ်စခန်းတွင် ကျမ်းကျိန်ပြီးသစ္စာရေသောက်ကာ ရက္ခိုင့် တပ်မတော်၏ ရဲဘော်တစ်ဦး အဖြစ်ခံယူသောအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ်မှ သင်တန်းဆင်း ရဲဘော်များအား ယခုလို အမှာစကားပြောကြားသည်။
“ ရက္ခိုင့်ကံကြမ္မာကို ရက္ခိုင်သားတို့လက်ဖြင့် ဖန်တီးရန်အတွက် အမျိုးသား တပ်မတော်တစ်ရပ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသလို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အပါ အဝင် တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ပြန့်ကျဲရောက်ရှိနေကြသော ရက္ခိုင်ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးကလည်း အမျိုးသားတပ်မတော် တစ်ရပ်ကို တောင်းဆိုနေသောကြောင့် မိမိတို့ ရက္ခိုင့် တပ်မတော်အနေဖြင့် ရက္ခိုင်ပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒကိုဖြည့် ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် ရဲဘော်တို့အနေဖြင့် ဘဝ၊သွေး၊ချွေးတို့ကိုစတေး၍ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားရန် လိုကြောင်း” ပြောကြားသည်။
ယင်းပြင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ်မှ အမျိုးသားရေးသတိ၊ တော်လှန်ရေးသတိ၊ စစ်ရေးသတိများ ရှိကြရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ယခုလို အလေးအနက်ပြောကြားသည်။
“ အမျိုးသားရေးသတိ၊ တော်လှန်ရေးသတိ၊ စစ်ရေးသတိများမလွတ်သွားစေရန် စက္ကန့်တိုင်းကို သတိရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် နှင့် ရက္ခိုင်ပြည်သူလူထု အတွက် ပြောင်မြောက်ပြီး ပေးဆပ် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံလိုသော သူရဲကောင်းများ များစွာလိုအပ်နေကြောင်း၊ ရက္ခိုင်မိဖ ပြည်သူများကိုလည်း မိဖပြည်သူတို့လိုချင်သောအရာကို ရက္ခိုင့်တပ်မတော် တစ်ခုတည်းက လုပ်ယူ၍ မရနိုင်သောကြောင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နှင့်အတူ လက်တွေ့ကျကျ အမျိုးသားရေးအသိဖြင့် ပူးပေါင်း ပါဝင် ဝန်းရံပေးရန်လိုအပ်ပါကြောင်း ” ပြောကြားသည်။
သင်တန်းဆင်းပွဲတွင် အောင်စစ်သည်ဆု အပါအဝင် လက်ဖြောင့်ဆု၊ စစ်ရေးပြထူးချွန်ဆု၊ စာပေထူးချွန်ဆု၊ ဇွဲဆု အပါအဝင်ဆုပေါင်း (၉) ဆုကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ အောင်စစ်သည်ဆုကို သင်တန်းသား အောင်အောင်မှဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ပြီး ဇွဲဆုကို အသက် (၄၀) နှစ်အရွယ်ရှိ သင်တန်းသားတစ်ဦးမှရရှိခဲ့သည်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်သည် လက်ရှိမျက်မှောက်ကာလတွင် ရက္ခိုင်ပြည်သူလူထုတို့ ပိုင်ဆိုင်ထားသော စည်းလုံး ညီညွတ်မှုအကောင်းဆုံး၊ အင်အား အခိုင်ခံ့ဆုံး၊ တောင့်တင်း အကျစ်လစ်ဆုံးသော တပ်မတော်ဖြစ်သည့်အပြင် ရက္ခိုင်ပြည်သူလူထုချစ်သော တပ်မတော်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ထို့နောက်တက်ရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များအား နေ့လည်စာဖြင့် တည်ခင်း ကျွေးမွေးခဲ့ပြီး ညနေဖက်တွင် သင်တန်းဆင်းရဲဘော်များ၏ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်ကို ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
On January 9, 2014 January 9, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
On January 9, 2014 January 9, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
13 ม.ค.57 … รพ.มงกุฎวัฒนะ จะเตรียมพร้อมสนับสนุน กปปส.แจ้งวัฒนะ – ชมรมแพทย์ชนบท และ/หรือ เต๊นท์พยาบาลที่สนับสนุนมวลมหาประชาชนที่ย่านแจ้งวัฒนะ โดย รพ.มงกุฎวัฒนะ จะสนับสนุนรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งสำรองเตียง – ยา – เวชภัณฑ์ ตลอดจนแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรับผู้ป่วยจำนวนมากหรือผู้ป่วยอาการหนักที่แพทย์อาสาจำเป็นต้องส่งตัวมาเข้านอนรักษาตัวใน รพ. ทั้งนี้ รพ.จะเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยตรงเอง ขอเพียงแต่ท่านผู้ชุมนุมพก ‘บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก’ มาแสดงตนด้วย จะได้ไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลใดๆ นอกจากนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะ จะจัดซุ้มอาหารอร่อยๆ และ กินฟรี เพื่อบริการผู้ชุมนุมทั้งวัน วันละ3มือ โดยโภชนากรและพ่อครัวมือเยี่ยมจะบรรจงทำให้แก่เพื่อนพ้องน้องพี่ อีกทั้ง รพ.มงกุฏวัฒนะจะสนับสนุน ห้องสุขา – ห้องอาบนำ้ – พร้อมสถานที่จอดรถ 400 คัน ให้แก่มวลมหาประชาชนย่นแจ้งวัฒนะด้วย ตลอดระยะเวลา Shutdown Chaengwattana ด้วย …สุดท้าย รพ.มงกุฎวัฒนะ จะไม่อนุญาตให้ตำรวจหรือบุคคลแปลกหน้าใช้พื้นที่สูงข่มของอาคาร รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐใดๆทั้งสิ้น อีกทั้ง รพ.มงกุฎวัฒนะ จะใช้บุคลากรชายที่เป็นอดีตทหารเก่าเตรียมพร้อมยืนหยัดเคียงข้างมวลมหาประชาชนตลอดเวลา
พลตรี นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา … ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ
!!!!! SUTHEB PDRC LEADER ANTI GOVERNMENT PROTESTER:
also made clear on non-violent protests in the Occupy Bangkok rallies.
But he warned protesters of the red-shirt infiltrators who were ordered by their leaders to wear normal shirts and mingle with the protesters at the PDRC rallies with intent to create violence.
He then asked protesters to help watch out for these infiltrators who might carry guns and might torch government buildings and other officers to put the blame on protesters so as to justify suppression of the protesters by the government.
BANGKOK, Jan9– Red Shirt activists will hold rallies at various locations this weekend inaprelude to their stand against anti-government protesters’ move to occupy the capital on Monday.
89 Myanmar workers return from Malaysia after brawl
The Myanmar Embassy in Malaysia said 89 Myanmar migrant labourers working inashipyard in Miri, Borneo, have been repatriated after they recently became embroiled inafight with their fellow Indonesian dockworkers.
Labour attaché Soe Win said 20 people would fly back to Yangon on Wednesday evening, while 69 others already returned on Tuesday.
ศาลยกคำร้อง DSI เพราะเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหา ไม่มีเจตนาหลบหนี – บางคนยังไม่ได้รับหมายเรียกด้วยซ้ำ ///ถอดรองเท้าตบหน้าธาริต สามรอบมันยังไม่เงิบเท่านี่เลย ฮ่าๆ
@ วุฒิพงษ์ ลาเต้
Court rejects DSI request for arrest warrants for 35 protest leaders; sees no sign of their fleeing, instructs reissuing summonses
Thank you, Sukasanari School! (image credit: เวทีราชดำเนิน) 9.JANUARY 2013